आगामी साउनबाट नियुक्त्त हुने सरकारी कर्मचारीले पेन्सन नपाउने, पेन्सनको विकल्प के ? « News24 : Premium News Channel
आगामी साउनबाट नियुक्त्त हुने सरकारी कर्मचारीले पेन्सन नपाउने, पेन्सनको विकल्प के ?
काठमाडौं । आउँदो साउनबाट नियुत्त हुने सरकारी कर्मचारीले पेन्सन नपाउने भएका छन् । सरकारले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने भएपछि
यस्तो नियम लागु गर्ने निर्णय गरेको हो । यो नियम २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरुको हकमा लागु हुनेछ । उनीहरुले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणमा चित्त बुझाउनुपर्ने छ ।